Ndishevedze kana wabuda muBeta, Google Gears! | Martech Zone
Chitatu, June 6, 2007 Chitatu, June 6, 2007 Douglas Karr
Zvakanaka ini handina chokwadi chekuti mune chii heck chakazara mukati Google Gears yekusunungurwa kwayo kweBeta, asi ndinofunga vanofanirwa kudzokera kuAlfa.
Ndakatanga kumhanya Google Gears rinenge vhiki rapfuura kuyedza iko kunze kwekushanda mashandiro senge Google Reader. Ini handina kukurumidza kucherechedza chero nyaya dzichimhanyisa iyo yekuwedzera, asi pamusoro pevhiki ndaifanira kumanikidza kusiya Firefox zvakanyanya uye nekuwedzera uye nekuwedzera.
Pakupedzisira, kungova nepeji rimwe chete rakavhurwa (iro risinginei nekutarisa pasiri pamhepo) zvaizokonzeresa kuti Firefox ipore. Humwe husiku ndakazviona ndichishandisa Yahoo Webmessenger. Ndakanga ndichida kuziva kuti yaive Yahoo yaindikonzeresa nyaya. Nhasi ndakarega kuishandisa uye ndichine nyaya. Ini ndakaremadza Google Gears mushure meFirefox yaizooma chando maminetsi mashoma uye voila! Ndasununguka zvakare.
Ndine urombo, Google. Dzorera mabhuti ako mukambasi, odha imwe pizza, uye cheka makoni ekushambadza echikwata ichi - vanofanirwa kudzokera kubasa!
MySQL Query yekutora Mapoka muWordPress
Jun 6, 2007 na2:24 AM
Pandakanga ndichiita zvekukurumidza kutamba neGears ndakawana zvinhu zvisinganzwisisike zvichienderera mberi asi ndakazviisa pasi pechokwadi chandaive ndichigadzira uye kuti paizove nemhedzisiro, ndakagumawo kuibvisa sezvo ndatova nezvakawanda kwazvo firefox. ma-add-ons akaiswa.
Ini ndinoona kuti firefox pachayo inowedzera kusavimbika kune mamwe ma-add-aunayo panguva imwe chete, ndisina chokwadi kana izvi zvichidzika kusvika kundangariro inodonha kana kungononoka kudzika.
Jun 6, 2007 na4:22 AM
google chete ndiyo ine guts yekuburitsa beta software pamwero wakakura kudaro.
takamboedza kuburitsa beta software uye nzvimbo zhinji dzekushareware dzakaramba kugashira software… dzichiti zvinogona kukonzera kusagadzikana pamushini wemushandisi.
Asi saiti imwecheteyo ichave yakanyanya kufara kuburitsa beta zvinhu kubva kune hombe vakomana 🙂
Jun 6, 2007 na5:12 AM
Ndine nyaya dzakafanana. Infact, ndamira kushandisa firefox… mukupedzisira ndakaziva kuti aive magiya uye ndikadzima maadd-on ese…kusimbisa kuti ndiro dambudziko rekuwedzera,\_n.
Vakadzosa vamwe zvishoma nezvishoma vasina magiya. Neimwe nzira firefox ichiri kukanganiswa. 🙂